Nampahafantarin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, fa ny faha-8 ny volana janoary ho avy izao no hamoaka ny vokatra ofisialy amin’ny fifidianana filoham-pirenena notanterahina ny faha-19 ny volana desambra teo izy ireo. Izany hoe mitodika …Tohiny
Ny isan-jato azon’ny kandidà Roland Ratsiraka nandritra ny fihodinana voalohany no nanombohantsika ny adihevitra manodidina ny fifidianana omaly, ka nilazana fa tena nisy tokoa ny hosoka sy hala-bato. Sarotra ho an’ny mpanara-baovao politika tokoa mantsy …Tohiny
« lacrymogène » teny Tsaralalàna : Nasaina nividy sarom-bava ireo mpiandry marary
Nisy fiantraikany goavana teo amin’ireo zaza notsaboina tao amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza eny Tsaralalàna ny fanapoahana «lacrymogène » lavareny nataon’ny mpitandro filaminana ny andron’ny alarobia lasa teo. Toa ny efa mpitranga isaka ny …Tohiny
Fanamboarana kalandrie : Lamaody ireo asiana sarim-pianakaviana
Tahaka ireo entana rehetra, izay tsy afa-misaraka amin’ny andavanandron’ny olona dia manaraka lamaody ihany koa ny kalandrie na alimanaka. Tato anatin’ny taona vitsy izay dia mirona amin’ny fanaovana “calendrier personnalisé” ny olona. Maro araka izany …Tohiny